Parameter teknika ● Hafainganana: 0,1 hatramin'ny 100 rpm, azo averina ● Hafainganana hafainganam-pandeha: 0,1 rpm ● Fanaraha-maso hafainganam-pandeha: Keypad membrane cw (jiro maitso) / ccw (jiro manga) ● Asehoy: 3-tarehimarika LED mampiseho rpm ankehitriny ● Fanaraha-maso ivelany: Hanomboka / atsaharo, fanaraha-maso cw / ccw ary fifehezana ny hafainganana 0-5 V / 10 V, 4-20 mA ary 0-10KHz ● Fandraisana fifandraisana: RS485 ● Famatsiana herinaratra: AC 90V-260 V 50/60 Hz ● Fanjifana herinaratra: ≤30 W ● Toe-javatra miasa: Temperature 0 hatramin'ny 40 ℃, hamandoana mifandraika <80% ● Lanjan'ny fiara: 2 ....
MP Series Micro plunger pump dia volume kely, avo lenta, andian-tsarin'ny fiainana lava. Indrindra ho an'ny fampitaovana fampifanarahana fitaovana sy fitaovana. Afaka mamindra ranon-javatra latsaky ny 5ml. Ireo mpampiasa dia afaka mitondra ny motera mihetsika hifehezana azy, na misafidy mpamily hafa. Misy karazana fiara roa hisafidianana: 12.5-QD1 Tsy misy rotor mihidy (halavan'ny hafainganam-pandeha: 0.75-450rpm) 12.5-QD2 miaraka amina rotor mihidy (ambaratonga hafainganam-pandeha: 90-450rpm) Ireo maodely roa ireo dia misy fifandraisana misy valizy elektromagnetika, manana RS485 commu ...
Natao ho an'ny fampiharana fahadiovana avo lenta, ny kodiarana anaty malefaka malefaka an'ny Huiyu Silicone Tubing dia afaka mampihena ny mety hisian'ny fitrandrahana sombin-javatra sy ny fananganana mikroskopika mandritra ny famindrana tsiranoka marefo. Ny famakafakana an-trano ny faran'ny anatiny amin'ny fantsom-pandrefesana silikônika raha oharina amin'ny fantsom-pandrefesana hafa dia mampiseho fa avo telo heny izy io. Ho fanampin'izany, ity lalan-tsolika malama ity dia manamora ny fanadiovana sy fanamorana ny rafitra. Amin'ny fampiasana dingana fanasitranana platinum, Huiyu Sanitary Silicone Tu ...
Fampidirana sy hevi-dehibe hose Viton® fluoroelastomer hose Viton avy amin'ny 100% Pure - high synthetic rubber; Fanoherana hafanana tena tsara: -40 ° F maharitra maharitra amin'ny maripana 400 ° F, mari-pana miserana in 600 ° F; Mahavita mahatanty vahaolana lehibe indrindra sy akora simika noho ny fingotra ara-barotra; Ny fandeferana tsara amin'ny karazana menaka, solika, lubricants ary ny ankamaroan'ny asidra mineraly; Ny fantson-tsolika VITON fluorine dia mahazaka aliphatic sy arom maro ...
Fampidirana sy fisongadinana lehibe Tygon # R-3603 fitaovana famakafakana simika Miorina amin'ny ankamaroan'ny zavatra ampiasaina matetika amin'ny akora simika tsy biolojika ao amin'ny laboratoara; Malefaka, mangarahara ary mora zokinjokin'ny olona, ​​fahateren'ny rivotra noho ny fantsom-pohy; Ny fanoherana ny mari-pana ambany dia tsara, ho an'ny fampiasana -43 ℃, dia mitazona ny fahafaha-miovaova; Izy io dia azo ampiasaina ho toy ny condenser, incubator, trachea, ary fantsom-pantsakam-pamokarana laboratoara sy fantsona paompy peristaltika. Famaritana isa isa fantsona ID (mm) Wall t ...
Fampidirana sy hevi-dehibe ny fantsom-pahefana biolojika fantsom-pahefana peristaltika, paingotra sela miaraka amin'ny paompy peristaltika fampiasa maharitra, fiainana lava kokoa noho ny fantsom-silika in-30; Azo averina sterilization autoclave; Mifanaraka amin'ny fenitra amerikana USP Class VI, FDA ary NSF; Ny biocompatibility dia mampiakatra ny fenitra ISO10993; Ny henjana 60 heny mahery noho ny fantsom-pandrefesana. Famaritana mari-pamantarana isa Tube (mm) hatevin'ny rindrina (mm) Lohan'ny paompy mety M / fonosana Pha ...
Fampidirana sy hevi-dehibe Noroseo®Chemical hose Izy io dia manana fanoherana simika tena tsara sy fiainana maharitra Teflon rindrina anaty ny fantsom-pantsana, ambonin-javatra malefaka, tsy misy plastika, adsorption manohitra ranoka, tsy misy mandray; Ny sosona ivelany an'ny fitaovana maharitra maharitra maharitra maharitra, dia tsara ho an'ny asidra, alkaly, alikaola, ketôn ary fanaterana ranoka manimba hafa. Famaritana isa isa fantsom-pitaovana (mm) hatevin'ny rindrina (mm) paompy mifanaraka M / fonosana Norprene®Chemical 16 # ...
Fampidirana sy fisongadinana lehibe Fluran®F-5500-Hose-mahatohitra harafesina mafy; Manohitra ny ankamaroan'ny asidra, alkaly, solika, solvent organika; Fampiasana maharitra amin'ny tontolo 204 maximum be indrindra; Tena mahazaka ozonina sy fanoherana ny toetrandro izy io; elastity, malefaka tsara, dia mety amin'ny fitaterana haino aman-jery manimba tena amin'ny fantsona paompy peristaltika. Famaritana mari-pamantarana isa Tube (mm) hatevin'ny rindrina (mm) lohan'ny paompy mety M / fonosana Fluran®F-5500-A 16 # 3.1 ...